Ogwe ngwaọrụ akwụsịla na Okwu, gịnị ka m ga -eme? | Nzukọ mkpanaka
Ogwe ngwaọrụ akwụsịla na Okwu, gịnị ka m ga -eme?
Cristian Garcia | 04/10/2021 09:31 | Okwu Microsoft, Autlọ ọrụ akpaaka
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Microsoft Okwu, ị ga -amara na ọtụtụ ngwaọrụ, nke ekwughị nke ọma, dị n'ime ogwe ngwaọrụ n'onwe ya. Na na ọ na -apụ n'anya bụ nnukwu nsogbu. Ogwe a abụrụla menu nke gụnyere nhọrọ niile dị mkpa nke Okwu yana ya mere ma ọ bụrụ na ogwe ngwaọrụ apụ n'anya na Okwu ka anyị na -ekwu na ọ bụ nnukwu nsogbu mgbe ọ na -abịa ịhazi akwụkwọ ọ bụla maka ya.
Mgbe ụfọdụ, nke a nwere ike ime n'ihi mmejọ ma ọ bụ n'ihi oke okwu ọ na -apụ n'anya. Nke a kwa ọ gbatịpụrụ na mmemme Microsoft Office ndị ọzọ dị ka Microsoft Excel na Microsoft Power Point. Ogwe ngwaọrụ a dịkwa na mmemme ndị ahụ wee bụrụ ihe dị mkpa n'ọtụtụ ihe. Enwere ike zoo ya ma ọ bụ ibelata ya mere ọ bụrụ na ịmaghị otu esi eme ka ọ laghachite ị gaghị enwe ike ịnweta ya ruo mgbe ị debere ya na saịtị ya. Mana echegbula, enwere ike idozi ihe a niile ma nwee ike idozi ya ngwa ngwa na n'ụzọ dị mfe (dịka ọ na -adị mgbe niile).
Na ngwụcha akụkọ a, anyị ga -agwa gị ihe kpatara anyị ji eche na nke a na -emekarị, n'ihi na n'eziokwu na ịtụ anya ya, ọ nwere ike bụrụ maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Nke bụ eziokwu bụ na mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịbụ n'ihi njehie, mgbanwe ihuenyo na mkpebi ya ma ọ bụ maka ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga -eme ka ogwe ngwaọrụ kwụsị ma ọ bụ na -egosi mgbe niile na -ebelata na -enweghị mgbochi. Anyị ghọtara na ọ bụrụ na ị na -agụ akụkọ a, ọ bụ n'ihi na ịchọrọ ka ahụ ya anya mgbe niile.
1 Ogwe ngwaọrụ na -apụ n'anya na Okwu: Etu esi eweghachi ya?
1.1 Kedu otu esi eweghachi ogwe ngwaọrụ na ụdị Microsoft Okwu n'oge na -adịbeghị anya?
1.2 Kedu otu esi eweghachi ogwe ngwaọrụ na 2010 ma ọ bụ ụdị Microsoft Okwu mbụ?
2 Kedu ihe kpatara ogwe ngwaọrụ anaghị adịkarị na Microsoft Okwu?
Ogwe ngwaọrụ na -apụ n'anya na Okwu: Etu esi eweghachi ya?
Dabere n'ụdị Microsoft Office ị nwere, ntuziaka a ga -adịtụ iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere nke sitere na 2010 ma ọ bụ tupu mgbe ahụ, ị ​​ga -agụrịrị akụkụ nke isiokwu ahụ, nke kachasị na njedebe. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga -ekwukwa na nke a bụ maka ụdị sistemụ arụmọrụ Windows. Site na ihe a niile na ozugbo ị matara ihe ọ bụ, anyị ga -akọwa otu esi eme ka ogwe ngwaọrụ nke na -apụ n'anya na Okwu dịghachi ndụ na ngwa gị.
Kedu otu esi eweghachi ogwe ngwaọrụ na ụdị Microsoft Okwu n'oge na -adịbeghị anya?
Dịka anyị gwara gị, ọ bụrụ na i sitere na ụdị ochie nke Okwu Microsoft, ọ ka mma ịga na ngalaba ikpeazụ nke akụkọ ebe ọ bụ na anyị ga -amalite na ndị na -adịbeghị anya. Ihe ị ga -eme na Okwu bụ ileba anya n'elu aka nri nke ngwa mmemme a. Ị ga -aga n'aka nri n'akụkụ bọtịnụ imechi, belata na ndị ọzọ, N'ebe ahụ ị ga -ahụ bọtịnụ ịpị maka nhọrọ ngosi yana ka ị pịrị ya, a ga -egosipụta igbe.
N'ime igbe ahụ ị nwere ike họrọ otu ịchọrọ ka egosiputa ngwa Okwu. Nhọrọ kpochapụwo ga -abụ nke ga -apụta n'ihu gị ka ịpị ka "Gosi taabụ na iwu" Ozugbo ịpịrị ebe ahụ, ihe niile ga -apụta ọzọ na anyị ga -edozi nsogbu ahụ. Ya mere Anyị ga -edozirịrị eziokwu ahụ na ogwe ngwaọrụ na -apụ n'anya na Okwu.
Kedu otu esi eweghachi ogwe ngwaọrụ na 2010 ma ọ bụ ụdị Microsoft Okwu mbụ?
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị anaghị emelite Microsoft Office nke ukwuu, mgbe ahụ ị ga -anọ ebe a. Ikekwe ị ga -enwe 2010 ma ọ bụ ụdị Microsoft Okwu mbụ. Ma echegbula onwe gị nke ukwuu n'ihi na edoziri ihe niile, ọbụlagodi n'ụdị ochie. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ikpeazụ, anyị na -amalite site na ntuziaka ngwa ngwa iji weghachite ogwe ngwaọrụ efu:
Ugbu a ị ga -ahụ akara ngosi iji gosi mmanya ma ọ bụ mezie ya ma ọ bụrụ na belatara ya. Iji mara nke a n'ezie ị ga -ahọrọ taabụ dịka Home, ebe ahụ ka ogwe ngwaọrụ nwere ike ịpụta ọzọ nwa oge). Bọtịnụ a nwere ike ịbụ akụ ala na ụdị Microsoft Okwu ochie, Ọ nwekwara ike bụrụ mkpịsị aka ukwu dị ka nke anyị tinyere n'onyinyo dị n'elu. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ kwesịrị ịdị na akuku aka nri elu, akara ngosi ọ bụla o nwere. Ozugbo ịchọtara ntụtụ a wee pịa ya, ị ga -edozi ogwe ngwaọrụ niile nke pụtara n'oge ahụ. A ga -edozicha ihe niile nke ọma ruo mgbe ị ga -eji mkpịsị aka mkpịsị aka mepee ọzọ.
Kedu ihe kpatara ogwe ngwaọrụ anaghị adịkarị na Microsoft Okwu?
Tupu anyị aga, anyị chọrọ ka anyị mechie akụkọ ahụ na ihe kpatara mmanya a ji apụ n'anya, nke mere na ị na -echebara ihe niile echiche na ọ gaghị eme ọzọ. N'ụzọ dị otú a, ị gaghị aga na Google ma ọ bụ Mobile Forum ka ị na -eme ugbu a. Buru n'uche isi ihe ndị anyị ga -agbakwunye n'okpuru ebe a n'ihi na ha so na ntuziaka nke ị mụrụ ka esi weghachite ogwe ngwaọrụ Okwu.
Site ahụmịhe anyị ogwe ngwaọrụ na -apụ n'anya na Okwu n'ihi ihe ndị a:
Ị hapụla toolbar atọrọ ka ezoro ezo na akpaghị aka ma anaghị ahụ ya.
Usoro a na -egbochi explorer.exe ogwe ngwaọrụ ahụ apụọla kpamkpam.
La ihuenyo mkpebi ma ọ bụ agbanwere ihuenyo mbụ na nke ahụ bụ ihe kpatara ogwe ngwaọrụ jiri pụọ na enyo.
Ị pịrị na Pushpin ama ama ma ị kpọghere Ogwe ahụ niile na -apụ n'anya ma gosipụta na ọ masịrị ya.
Ọ bụrụ na nke ọ bụla adịghị nke a na -arụrụ gị ma ogwe ahụ apụtaghị, ị nwere ike ịga Microsoft Office na nkwado Okwu mgbe niile ma ọ bụrụ na akwụ ụgwọ ụdị gị. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụghị, chọọ ụzọ ọzọ na Okwu ga -adịrị gị mma dị ka onye nrụpụta okwu. Naanị otu n'ime ha ma jiri ya na ịntanetị bụ Open Office, a free okwu processor nke ụlọ nke gụnyekwara ụdị ọzọ na Excel akpọrọ Nọmba ma ọ bụ Microsoft Power Point, dị ka Draw. Ọ bụghị nhọrọ ọjọọ ma ị nwere ike iburu ya n'uche.
Anyị nwere olile anya na edemede a enyerela aka yana na ị maralarị ihe kpatara na ngwa ọrụ anaghị apụ n'anya na Okwu mana karịa, na ugbu a ị mara ka esi eme ka ọ pụta ọzọ wee hapụ ya ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ aro ọ bụla, ị nwere ike hapụ ya na igbe nkọwa. Hụ gị na edemede Mobile Forum na -esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Autlọ ọrụ akpaaka » Ogwe ngwaọrụ akwụsịla na Okwu, gịnị ka m ga -eme?
Otu esi ewepu ndabere na onyonyo n’efu na n’ịdị mma HD
Tụgharịa foto ka ọ bụrụ PDF n'efu: ibe weebụ kacha mma